China Diesel mpamono afo mpamokatra pump sy mpamatsy | KAIQUAN
Ny fantsom-pivarotana maotera enina XBC dia fitaovana famatsiana rano namboarin'ny orinasa anay araka ny GB6245-2006 fantsom-baomba nasionaly. Ampiasaina amin'ny rafitry ny famatsiana rano an'ny solika, indostrian'ny simika, gazy voajanahary, orinasa mpamokatra herinaratra, trozona, tobin-tsolika, fitahirizana, trano avo lenta ary indostria sy sehatra hafa. Amin'ny alàlan'ny ivom-pivarotana ny mari-pahaizana momba ny afo (fanamarinana) ao amin'ny sampana fitantanana vonjy maika, tonga hatrany amin'ny ambaratonga lehibe any Shina ny vokatra.
Ny paompin-tsolika maty solika dia azo ampiasaina hitaterana rano madio tsy misy sombin-javatra matanjaka eo ambanin'ny 80 ℃ na rano manala fananana ara-batana sy simika mitovy amin'ny rano. Momba ny fotoam-pivoriana ny fepetra momba ny ady amin'ny afo, hojerena ny fepetra momba ny fametrahana ny rano amin'ny trano sy ny famokarana. Ny paompin-tsolika maotera XBC dia azo ampiasaina tsy ao anatin'ny rafi-pitaterana famonoana rano irery, fa eo amin'ny rafi-pamatsiana rano iraisana amin'ny ady amin'ny afo sy ny fiainana, fa koa amin'ny rafi-pamatsiana rano ho an'ny fananganana, munisipaly, indostrialy ary fitrandrahana, famatsian-drano sy fako. sambo, operation any an-tsaha sy ny fotoana hafa.
- karazana spraoty karazana marindrano: famenon-tsolika tokana tokana, pump pump multistage mendri-pisiana, paompy famonosam-bidy roa, paompy lava roa ary karazana paompy hafa no voafantina ho an'ny unit, miaraka amina fizahan-tany sy tsindry.
- fandidiana mandeha ho azy: rehefa mahazo baiko fanaraha-maso lavitra ny paompin-drano, na tsy fahombiazan'ny herinaratra, tsy fahombiazan'ny paompy herinaratra sy fanamafisana hafa (manomboka) dia hanomboka ho azy ny singa. Ny fitaovana dia manana fanaraha-maso ny fizotran'ny fandaharana mandeha ho azy, ny fahazoan-doka automatique ary fampisehoana, fandalinana ny fihenan-keloka ary fiarovana.
- Fampisehoana tarehimarika: asehoy ny sata sy ny tarehimetan'ny fitaovana arakaraka ny toe-javatra ankehitriny. Ny fampisehoana an-toerana dia ahitana ny fanombohana, fampandehanana, ny hafainganam-pandeha, ny hafainganam-pandeha, (idle, ny hafainganam-pandeha) fanakatonana, sns. Ny marika amin'ny dingana dia ahitana ny hafainganam-pandeha, ny tsindry solika, ny hafanana amin'ny rano, ny hafanan'ny solika, ny volavolan-tariby, ny fotoana fiasan'ny vondron'olona, ​​sns.
- Fandaharana fanairana: manomboka ny fanairana tsy fahombiazana, fanairana ny fanerena ambany ny solika sy fanakatonana, fanairana ny hafanana amin'ny rano, fanairana ny hafanana ho an'ny solika, fanairana ny bateria ambany, fanairana ny solika, ambany fanairana, fanamafisam-peo tafahoatra ary fanakatonana.
- Ireo maodely fanombohana isan-karazany: amin'ny manual an-tserasera manomboka sy manakana ny fanaraha-maso, fanombohana lavitra sy fampiatoana ny foiben'ny fanaraha-maso, manomboka ary mihazakazaka miaraka amin'ny herin'ny maizina.
- Famantarana ny valin-kevitra momba ny sata: fanondroana ny fandidiana, manomboka ny tsy fahombiazana, fanairana feno, fanidiana ny famatsiana ny herinaratra ary ireo fambara momba ny soso-kevitra momba ny sata mifampiresaka.
- Fiara mandeha ho azy: amin'ny fijanonana mahazatra, ny rafitra fanaraha-maso dia hijanona tsy hikapoka ny bateria. Rehefa mihazakazaka ny milina dia hitarika ny bateria herinaratra ny mpamorona ny milina diesel.
- Ny hafainganam-pandeha azo zahana: rehefa tsy mifanaraka amin'ny tena fepetra ny fikorianan'ny mpandeha sy ny lohan'ny rano, dia azo averina ny hafaingam-pandeha vita amin'ny maotera.
- Digne députre de députle: rehefa tsy manomboka manomboka ny bateria iray dia hivadika ho solosaina hafa ho azy io.
- Ny bateria maimaimpoana fikojakojana: tsy mila manampy electrolyte matetika.
- Fitaovana rano palitao mialoha: mora kokoa ny atomboka rehefa ambany ny mari-pana ambony.
Hafainganam-pandeha: 990/1480/2960 rpm
Salan'isa kapaha-jaza: 10 ~ 800L / S
Lehibe fanerena: 0.2 ~ 2.2Mpa
Fanerena ny rivotra iainana:> 90kpa
Mari-panafody: 5 ℃ ~ 40 ℃
Ny halavan'ny rivotra: ≤ 80%
Previous: XBD Series Mitsangàna lava Axis mpamono afo
Manaraka: W Seires Fitaovana fanerena maharitra